चौध स्थानको मात्र चुनावी परिणाम आउन बाँकी : को अगाडी, को पछाडी ? – Setosurya
चौध स्थानको मात्र चुनावी परिणाम आउन बाँकी : को अगाडी, को पछाडी ?
काठमाडौं । दोस्रो चरण स्थानीय तह निर्वाचनको आन्तिम परिणाम आउने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक ३ सय २० स्थानको परिणाममा एमालेको अग्रता कायमै छ ।
एमालेले १ सय ४३, कांग्रेसले १ सय १७ र माओवादी केन्द्रले ३८ स्थान जितेको छ । संघीय समाजवादी फोरम ७, लोकतान्त्रिक फोरम ६, राप्रपा ४ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा २ स्थानमा विजयी भएको छ । तीन ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार चुनिएका छन् ।
पछिल्लो पटक सार्वजनिक परिणाअनुसार झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकामा नेकपा एमाले बिजयी भएको छ । प्रमुखमा चन्द्रकुमार शेर्मा लिम्बु १४ हजार ६ सय ८४ र उप–प्रमुखमा एमालेकै भोजकुमारी नेपाल १४ हजार ९ सय ६० मतका साथ निर्वाचित भएका हुन् ।
अपडेटः ३ सय २१ स्थानको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक, हेर्नुहोस् कसले कति स्थान जिते ?
इटहरी अपडेट : एमालेको अग्रता कायमै
दिनभरि सामान्य रहेको सप्तरी साँझमा तनावग्रस्त, औद्योगिक क्षेत्रमा सभा, गहुँबारीमा फाइरिङ
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मुखमै एमालेले गर्यो यति ठूलो निर्णय ! सुरु भयो यस्तो अभियान ..
एमाले भन्छ–हामी नपुशंक होइनौं, अराजकताको प्रतिरोध गर्छौं
१० विद्यालयमा सुरक्षित विद्यालय अभियान
बालुवाटारमै ओलीले लिए देउवा विरुद्ध यस्तो कडा अडान ! अब के गर्लान् देउवा ?
२७ बर्षपछी देउवा मुक्त हुदै डडेलधुरा……
मदन भण्डारी जन्मिएको गाउँपालिकामा एमालेको जित